Home Wararka War Degdeg ah: Ciidan Somaliyeed oo Adis Abeba loo Dirayo.
Kadib markii xaalku aad ugu xumaaday Abiy Axmed ayaa waxaa uu ku amray dhammaan qowmiyadaha Itoobiya ee aan ka ahayn Oromada iyo Tigray inay ciidan min 5000 ay u soo diraan magaalada Adis Abeba oo waxyar uun u jirta inay gacanta u gasho xoogagga habeysan ee Mucaaridka Itoobiya.
Mustaf Cagjar ayaa waxaa uu halhaleel ku tagay Somaliland, kadib markii uu ogaaday in dadka deggan Killilka aysan ogoleyn inay ka qeyb galaan dagaalka Amxarada iyo Tigrayga u dhaxeeya oo uu hor boodayao Oramka wareersan ee Abiy Axmed, si uu uga soo helo Somaliland dhallinyaro xaabo laga dhigto oo lagu shubo dagaalka Itoobiya. Lama oga tirada uu Muuse Biixi soo sheegay inuu xadka ka soo gudbin doono laakiin wax badan kama uusan soo helin.
Hasa yeeshee, markii Cagjar uu hadalka ku celiyey Abiy ayaa waxaa uu Oramka wareersan ee Abiy soo wacay Farmajo una sheegay in looga baahan yahay in Ciidamo Somaliyeed laga gudbiyo xad-beedaaka u dhaxeeya Somaliya iyo Itoobiya. Ciidankaas oo laga kala qaadayo gobollada Gedo, Bay, Bakool iyo Galgaduud. Ciidanka waxaa uu noqonayaa reeraha dega gobolladaas oo kaliya sida Digil iyo Mirile, Mareerxaan iyo xoogaa Habargedir iyo Marreexaanka Caabudwaaq iyo Balanballe laga qaadayo.
Shir degdeg ah oo ay Khadka ku yeeshee Farmajo, Fahad, Laftagareen iyo Qoorqoor ayaa lagu go’aamiyey in ciidanka xadka laga tallaabiyo iygoon wax hub ah wadan kadibna Shilaabo la isugu keeyo kuwa koofurta ka tagaya oo loo geliyo dharka ciidanka Liyuu Boliis ee ay Kililka leeyihiin. Hubka waxaa laga keenay mar hore Somaliland oo Berbara ayaa 8 jeer laga soo dajiyey, halkaas ayaana loogu qeybin doonaa.
Ciidanka Somalida waxaa lagu darayaa 2-3 boqol oo Liyuu Boliis ah oo afka Amxaariga u taqaanna, waxaana lagu shubayaa magaalada Adis Abeba oo loo qeybiyey qowmoyadaha inay difaac ka galaan, taas oo ah khaldkii ay USC sameysay markii ay Xamar Farmajo adeerkiis Maxamed Siyaad ay ka qabsatay.
Maxaa ku dhici kara Ciidankaas Somaliyeed?
Dhibaatoyin dhowr ah ayey la kulmi doonaan ciidanka Somaliyeed ee uu Farmajo dhex gelinayo Itoobiya, kuwaas oo noqon doona kuwa ku gebi ahaanba aan soo noqon oo ku baaba’a halkaas halista ugu ballaaran ee ay la kulmi doonaan ayaa ah:
Magaalada loo geynayo inay difaacaaan ma yaqaannaan oo cid ay xabad ku ridaan iyo cid ay ka dayaan ma kala garan karaan, waa dhul qabow ah oo buuraley ah, waana ku wada xanuunsan doonaan xataa haddaanu dagaalka soo gaarin aagooda waxay u dhamaan doonaan dacdarro iyo daryeel la’aan.
Waxay noqonayaa cadow aad loo gumaado oo ku soo duulay Itoobiya haddii ay mucaaridka Itoobiya ee Oramada iyo Tigrayga wada Socdaa ay qabsadaan Adis Abeba oo ay hadda kaabiga ku hayaan.
Haddii ay soo cararaan waxay soo dhex mari doonaan Oromada waxaana la hubaa in aanu hal Askari uusan Somaliya soo gaareyn isagoo bedqaba.
Reero gaar ah oo lagu laaynayo dagaal aan waxba uga galin, taas oo keeneysa in ciidankan aysan wax niyad ku dagaallameyn, keeni kartana in horin horin loo laayo haddii laga adkaado iyo haddi ay adkaadaanba.
Ciidankii Somalida ee Erateriya loo qaaday oo iyagana laga soo geliyey dhanka Erateriyo si loogu qariyo in ciidan Erateriyaan uu dagaalka ka qeyb galay oo Tigray haddii ay guuleystaan aysan colaad unu qaadin Erateriyaanka.
Isku soo duub waxa Somaliya ka socdaa looma dulqaadan karo oo waxaa uu Farmajo ku talagalay in Somaliya aysan ka harin burburka Itoobiya wuxuuna dhaxdeeda ka buuray colaad iyo isnaceyb, Oramadana waxaa uu hadda nooga dhigayaa cadow aan muddo dheer la dagaalno. Farmajo maanta ayuu qabasho leeyahay ee Somaliyey aan iska qabanno, warkaan MOL ku qoran waa la hubaa in la hubaa in la soo xusuusan doono ee ma waxay noqoneysaa maaalin la faraxsan yahay oo Farmajo la iska qabtay isag koxdiisana laga takhalusay misa maalin laga shallaayo?
Previous articleFarmaajo oo looga yeeray dalka Qatar! Maxaa soo kordhay?
Next articleBeesha Murusade oo $300,000 sooryo ah siisay Buurmadoow, codsadayna inuu Kheyre Madaxweyne ka dhigo!
Madaxii ilaalada MW Sharif Sheekh Axmed oo ay dileen ilaalada MW...
Safiirka Mareykanka ee Kenya oo sheegay in kiiska Badda ee Somalia...